TALO: Madaxda Sare, Malaaqyada Muqdisho & Muuse Suudiba mid baa u eg! | Hadalsame Media
Home Maqaallada TALO: Madaxda Sare, Malaaqyada Muqdisho & Muuse Suudiba mid baa u eg!
TALO: Madaxda Sare, Malaaqyada Muqdisho & Muuse Suudiba mid baa u eg!
Waxaa beryahan taagan arrin cakiran oo ku saabsan dhul la sheegay inay Dowladda Dhexe leedahay oo ay haystaan rag saraakiil ah iyo Muuse Suudi oo hadda ka tirsan Aqalka Sare.
Dad badan oo aan wanaag doon ahayn ayaa arrintan dul saaran iyagoo dadka ka iibinaya sheekooyin aan ugu dambaynta cidna anfici doonin, sida inuu gacan ka hadal dhoco.
SOO JEEDIN, DF MAXAA LA GUDBOON?
DF Somalia waxaa wanaagsan inay maanka ku hayso inay maamulayso dal muddo dheer sharci la’aan ahaa sidaa darteedna loo baahan yahay in dadka si la gudboon looga iibiyo soo rogista nidaamka iyo kala dambaynta iyadoon cidna u qaadanaynin in iyada suulka looga istaagayo.
Waxaa kale oo DF Muhim ku ah inay muhiimadeheeda lambarro kala horreeya u samaysato, tusaale ahaan, haddii ay tayda tahay anigu dhul iyo beero lakala haysto xilligan kamaba hadleen.
Sabab? Waayo marka dalka oo dhan nidaamka dowladeed la gaarsiiyo oo ay dadku amaan iyo nabad helaan, waxaa nidaamka jira u sahlanaan doonta inay dadka u xeer beegaan oo ay qof kasta siiyaan wixii ay xaq u leedahay, maadaama ay iyadu markaa awoodda leedahay.
Waxaa kale oo sahlanaan doonta in sare loo qaado tayada iyo fursadaha nololeed, taasoo keenaysa in aan qofna u baahan u hanqal taagga xoolo uu qof kasta leeyahay.
Waxaa kale oo marka uu dalku yeesho nidaam ka wada taliya sahlanaanaysa in la daboqo cadaalad isku mid ah, maadaama ay jiraan magaalooyin kale oo aan Muqdisho ahayn oo sidoo kale lagu kala haysto hanti ma guurto ah oo dowladeed ama mid dadwayne.
Siyaasadda wanaagsani waa midda wax xallisa ee ma aha midda wax sii murjisa, waxaa marka loo baahan yahay in lala tashado dad waxgarad ah oo meel fog wax ka odorosi kara, si loogu fursado fashil gaabiya daafad socodka lagu higsanayo in dalku yeesho nidaam hanta oo aan cidna cadow u arkin ama u ahayn.
MUUSE MAXAA LA GUDBOON?
Muuse Suudi oo ah siyaasi ka mid ah raggii soo baxay xilligii burburka waxaan usoo jeedin lahaa inuu ka shaqeeyo wixii umadda u dan ah, siyaasad is taakayn ah xumaan iyo samaan wixii ay lahayd Somalia waa soo aragtay 30-kii ilaa 40-kii sano ee ina dhaafay, cidina waxba kama dheefin.
Haddii dulmi lagu haysto oo ay jirto sabab sharci ah oo uu aaminsan yahay inuu dhulkaa u leeyahay ha maro hilinnada toosan isagoo cadaynaya sababta ay sidaa u tahay.
Waxaa kale oo muhim ah in uu ogaado inuu ka magac wayn yahay nin dagaal u gala wax la mid ah hal boos iyo wixii la hal maala ee uu woxooga qab ah muujiyo, shacabka daallana u turo dartoodna u dulqaato.
AAWAY ODAYAASHII MAGAALADA?
Dadka sufahada ah oo ku faraxsan in wax lagu ciyaaro naftooda iyo naf kale midna hadhoow ma caymin karaan, sidaa darteed waxaa muhim ah in dadka waxgaradka ihi ay arrinta ku baxaan oo si uun u xalliyaan.
Waxyaabaha Muqdisho dagaal uga dhamaan wayday waxaa koow ka ah iyada oo aan lahayn marjac iyo madaxya wayn wax ka eega sanduuqa bannaankiisa oo mar kasta xeeriya danta guud ee umadda ka dhexeeysa.
Si haddaba, iminka loo badbaadiyo hambada hartay, waa in doorkaasi maanta helaa duul ciyaara oo dadka isu duma, wixii la isku qabtana daweeya, waayo Muqdisho waa ka wayn tahay magaalo boos dartii loogu dagaallamo ee dib halla iskugu noqdo.
Tifaftirka: Hadalsame Media
Previous article”In aad bambooyin badan haysataan dadka ugama horraysaan!” – Maradona oo lagu ganaaxey weerar uu Maraykanka ku qaaday!
Next article”Dalka waxaa u soo shaqo doontay DHAKHAATIIR ajaanib ah oo aqoon ahaan liita!” – DF Somalia